Izindaba - Ubuchwepheshe obusha buphendula udoti wepulasitiki ube uphethiloli wendiza
Ubuchwepheshe obusha bushintsha udoti wepulasitiki ube uphethiloli wendiza
Abacwaningi baseWashington State University benze indlela yokuguqula nsuku zonke ipulasitikiudoti kuphethiloli wejet, inyuvesi imemezele ngoLwesibili. Ucwaningo lushicilelwe ku-inthanethi kujenali yaseBrithani i-Applied Energy.
Abacwaningi bavuma izinto ze-polyethylenenjengamabhodlela amanzi amaminerali, amabhodlela ezingane kanye nezikhwama zepulasitiki zibe izingcezwana ezilingana nezinhlamvu zelayisi futhi zibekwe ku-activated carbon, i-catalyst. "Kubhakwa" ku-reactor ye-tubular emazingeni okushisa asukela ku-430 ° C kuya ku-571 ° C, izingcezu ekugcineni ziguqulwa zibe ngu-85% we-jet fuel kanye ne-15% yedizili.
Abacwaningi bathi ipulasitiki inama-athomu e-hydrogen amaningi, ayingxenye ebalulekile kaphethiloli. Kodwa ipulasitiki inzima ukuyehlisa, futhi ukungezwa kwe-catalyst kuphela kunganqamula izibopho zayo zamakhemikhali futhi kube uphethiloli. Bakwazile ukuguqula ama-500kg epulasitiki abe ngu-350kg kaphethiloli futhi bakhiqize amagesi avuthayo afana ne-hydrogen, i-methane, i-ethane ne-propane. Cishe wonke amandla atholakalayo kumapulasitiki angaqoqwa kusetshenziswa le ndlela, futhi izinga lamandla lihle, futhi inqubo ifanele ukukhiqizwa ngobuningi.
Isikhathi sokuthumela: Aug-03-2021